I-China JAW CRUSHER PLATE-JAW LIner Manufacture and Factory | Shanvim
Izingxenye ze-Jaw Crusher
Izingxenye ze-Cone Crusher
I-MANTLE & CONCAVE
Izingxenye Ze-Crusher Ezinomthelela
I-Ceramic Blow Bars
Ezinye Izingxenye Zokugqoka
Izingxenye ze-Metal Crusher
I-Apron Feeder Pans
UHLAYA CRUSHER PLATE-JAW LIER
I-Jaw Plates noma i-Jaw Dies yizingxenye zokugqoka ezivame ukushintshwa ze-crusher yomhlathi, ngakho ikhwalithi yokufa komhlathi ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezinquma ukusebenza kahle kokuchoboza kanye nesikhathi sokusebenza.
Iqoqo lamapuleti emihlathi akhiwa okugudlukayo (umhlathi onyakazayo) kanye nepuleti lomhlathi elingashintshi (umhlathi omile). Ukucindezelwa kwezinto ezichotshozwa ku-crusher yomhlathi kufinyelelwa lapho umhlathi onyakazayo ucindezela i-feed ngokumelene nokufa komhlathi ongashintshi. Itshe lihlala emhlathini womshini wokuchoboza kuze kube yilapho lincane ngokwanele ukudlula igebe libheke phansi emihlathini.
Jawu Plates noma Umhlathi Uyafa yizona ezishintshwa kaningi gqoka izingxenye ze-crusher yomhlathi, ngakho izinga le kufa umhlathi kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezinquma ukusebenza kahle kokuchotshozwa kanye nesikhathi sokusebenza.
Isethi ye amapuleti emihlathi zakhiwe yi- ezinyakazayo (shwiba umhlathi) kanye ipuleti lomhlathi elingaguquki (umhlathi omile). Ukucindezelwa kwezinto ezichotshozwa ku-crusher yomhlathi kufinyelelwa lapho umhlathi onyakazayo icindezela i-feed ngokumelene ne- ukufa komhlathi okungaguquki. Itshe lihlala emhlathini womshini wokuchoboza kuze kube yilapho lincane ngokwanele ukudlula igebe libheke phansi emihlathini.
Izingxenye Zangempela Ezingezinye Eziyisipele - Izingcwecwe Zemihlathi Enziwe ngabakwa-SHANVIM®
I-SHANVIM® ikhiqiza, izitoko kanye nempahla "Enye indlela yangempela" amapuleti emihlathi yohlu olubanzi ngokugcwele lwezigayi zemihlathi ze-OEM ezihlanganisa kodwa ezingakhawulelwe kokuthi: Metso®, Sandvik®, Extec®, Telsmith®, Terex®, Powerscreen®, Kleemann®, Komatso®, Kemco®, Finlay® neFintec®.
Isaziso: Ithebula elilandelayo alibandakanyi wonke amapuleti emihlathi e-OEM ashintshekayo esingawakhiqiza. Uma udinga izesekeli ezivela kwamanye amabhrendi, noma wazi inombolo ye-OEM ye-serial plate ofuna ukuyishintsha, noma ingakunikeza ngomdwebo wamapuleti emihlathi odinga ukuwenza ngendlela oyifisayo, sicela ukhululeke Xhumana nathi nge-imeyili noma ngocingo.
Kokubili umhlathi omile nonyakazayo ungase ube isicaba noma uthayela. Ngokuvamile, amapuleti emihlathi enziwe ngensimbi ephezulu ye-manganese okuyimpahla yokugqoka ehamba phambili. High manganese steel yaziwa nangokuthi Insimbi ye-Hadfield manganese, insimbi okunemanganese yayo kuphezulu kakhulu futhi enayo izakhiwo ze-austenitic. Amapuleti anjalo awaqinile nje kuphela kodwa futhi ane-ductile futhi asebenza kanzima uma esetshenziswa.
Sinikeza amapuleti emihlathi ngamabanga angu-13%, 18% kanye nama-22% e-manganese ane-chromium esukela ku-2% -3%. Bheka ithebula elingezansi lezinto zethu zokufa zomhlathi we-manganese:
Okwedlule: IINGXENYE EZISELELE ZE-HAMER-METAL SHREDDER
Olandelayo: I-CHOCKY BAR-KULULA UKUSEBENZISA
I-Crusher Jaw Plate
Lungisa futhi uhambise I-Jaw Plate
I-Jaw Plate Egxilile
I-Jaw Crusher Pitman
Izingxenye Ezisele Zomhlathi Zemihlathi
I-Jaw Crusher Spares
Izingxenye Zokugqoka Zemihlathi
I-Jaw Plate Casting
I-Jaw Plate Crusher
I-Jaw Plate Enyakazayo
I-Sandvik i-Jaw Plate egxilile
I-Sandvik Swing Jaw Plate
I-Swing Jaw Plate
Guqula i-Plate Jaw Crusher
AMAPLATES OMHLATHI WOMGODI WAMAMINI
INGABE SHANVIM YAKHO
Nganoma yiziphi izindaba zokuthobela sicela usithinte ngokuthumela i-imeyili ku sales@shanvim.com